Inqubomgomo yocwaningo - iSiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
I-XY Tower inake kakhulu ucwaningo nentuthuko yomkhiqizo futhi inamathela kuwo njengomgomo wesikhathi eside. I-XY Tower itshala izimali minyaka yonke imali efanelekile yemali engenayo kwi-R & D futhi yathola isitifiketi “senkampani yezobuchwepheshe obusezingeni eliphakathi nendawo” esakhishwa uhulumeni wasekhaya.
Ushukunyiswa yinqubomgomo yokuqamba nokwenza ngcono ikhwalithi, umnyango we-R & D uhlonyiswe ngelebhu yesimanje esiza ukwenza imisebenzi ehlukahlukene ye-R & D.
Umnyango we-R & D usebenza ngemibono nezixazululo ezintsha esikholelwa ukuthi zengeza inani kule mboni futhi ezisetshenzisiwe kwimikhiqizo yethu eminingi.
I-R & D ithimba lethu lakhiwa onjiniyela abaphezulu benkampani nabalingani bethu njengamayunivesithi nezikhungo zocwaningo. Ithimba le-R & D lenza ucwaningo olunzulu lokuqoqa ukuqonda mayelana nemboni kagesi nentuthuko eyenzekayo emkhakheni, wensimbi engaphezulu, imibhoshongo yokudlulisa, imibhoshongo yezingcingo, izakhiwo zesiteshi kanye nezinsimbi zensimbi. Imininingwane eqoqwe ocwaningweni iyarekhodwa iphinde ihlaziywe ukuze isetshenziselwe ukuthuthukiswa komkhiqizo noma izinkomba kuphela.
Amalungelo obunikazi sinawo
I-UCC itshala izimali minyaka yonke imali efanelekile yemali engenayo ezinhlelweni ze-R & D ezithuthukisa imikhiqizo enqenqemeni nesisombululo sokuncintisana ezingeni lomhlaba jikelele. Ngamaphrojekthi asetshenzisiwe, amalungelo obunikazi abhalisiwe omhlaba, anikeze izixazululo ezisezingeni eliphakeme kanye nokubamba iqhaza kwalo, imvamisa njengomlingani oholayo.